Maamulka Jubbaland oo ka warbixiyay ammaanka deegaannada hoos yimaada – Radio Muqdisho
Maamulka Jubbaland oo ka warbixiyay ammaanka deegaannada hoos yimaada
Afhayeenka Nabad-Sugidda Jubbaland, Axmed Maxamuud Maxamed (Axmed Carab) oo Saxaafadda kula hadlay Magaalada Kismaayo ayaa ka warbixiyay Howlgalladii ugu dambeeyay ee Ciidanka Jubbaland ay qaadeen.
Axmed Carab ayaa sheegay iney Ciidamadu guulo la taaban karo kasoo hooyeen duullaamadii ugu dambeeyay dhulka badan lagala wareegay Ururka Al-shabaab, isagoo tilmaamay markii laga itaal roonaaday iney billaabeen waxyeelleynta Shacabka.
Afhayeenka ayaa soo hadal qaaday Qaraxii dhawaan lagula eegtay gaariga rakaabka ahaa agagaarka Magaalada, kaasoo uu ku tilmaamay iney ka mid tahay falalka naf la caarinimo ee cadawga Al-shabaab.
Wuxuu sidoo kale Axmed Carab sheegay iney gabbaad iyo garab ka helaan Xaasaska halkan u jooga Al-shabaab isla maraakan ay musaafurin doonaan, si uu ugu yaraado dhibta ay bulshada ku hayaan.
“Annaga iyo adinka heshiis ma nihin, col baa na dhexyaalla, dil baan naga dhexeeyo, inta raggiina ay duurka ku jiraan oo ay cadow ku yihiin Jubaland naguma dhax jiraysaan ee intaan la idin soo raadinin magaalada isaga baxa”
Jubbaland ayaa Sanad ka hor sidan oo kale u musaafurisay Lixdameeyo ka tirsan Xaasaska Saraakiisha Al-shabaab oo ku sugnaa magaalada Kismaayo, markaas oo wixii xilligaa ka dambeeyay ay magaaladu noqotay mid xasilloon.
Boliiska Mombasa oo baaraya caafimaadka Saddex dumar ah oo lagu eedeeyay argagixisanimo